Console ithebula - ucezu yasekuqaleni kakhulu ifenisha engasetshenziswa wonke amakamelo. Kwaphela isikhathi eside la mathebula asetshenziswa kokubili zokuhlobisa kanye nama-practical. Nge console, ungagcwalisa isikhala esingenalutho futhi unike egumbini lakho isitayela esiyingqayizivele. Lezi zingcezu nenhle, kodwa functional kakhulu ifenisha sisihle ngokulinganayo emaphasishi esikoleni, emakamelweni, amakamelo ophilayo noma emahhovisi. ithebula Modern console zingenziwa ezihlukahlukene izitayela - kusuka esiqinile classical ukuba sibambe yesimanje. Ngokusho indawo yayo, lokhu ifenisha sehlukaniswe ekhoneni udonga. Ngingalutholaphi usebenzise lezi nempahla ekhaya?
Esikhathini ephasijini: usenze Ingaphakathi
ithebula Console kahle iyiphi ephasijini ingaphakathi. Njengoba le ndaba has usayizi amancane ububanzi ezincane, zingafakwa ngaphansi nesibuko umdwebo noma isiphanyeko. Kuyinto elula ukugcina ifonibhuku uqobo idivayisi umile, okhiye nokunye. Ngaphezu kwalokho, angazamukela ezihlukahlukene izingoma zokuhlobisa: isitsha sezimbali izimbali, zonyaka ukuphila namanje, statuette - kulesi simo, etafuleni izodlala indima esinye sezici elingaphakathi design.
Esikhathini yokugezela: isitoreji isikhala
Isimanga siwukuthi kodwa etafuleni console iye yasetshenziswa yokugezela ngempumelelo. Lapha, le ifenisha nge zangaphansi ukhonza njengephayona isikhala isitoreji zokugeza kanye amathawula, futhi singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela isisekelo echibini eyakhelwe ngaphakathi.
Esikhathini lokulala: lula nenhle
I yabagibeli zivame kakhulu ezisetshenziswa nenhle ithebula emhlophe console. Bangadlala indima eliseceleni kombhede amatafula noma ube ucezu esizimele ifenisha, idlala indima zokuhlobisa. Kungcono ukukhetha imodeli ne zangaphansi, kuleso simo etafuleni ingasetshenziswa njengendlela esifubeni zangaphansi yokugcina.
Ekhishini: ilondoloza isikhala
ithebula Console omkhulu "uzizwe" futhi emakhishini. Kungase kubonakale sengathi lokhu akusebenzi ifenisha ngamagumbi encane. Yize kunjalo, uma ufake lolu ifenisha for ubakaki ezengeziwe, kuthatha isikhala okuncane futhi iba usule elula, exhunywe odongeni. Lesi yisisombululo omuhle ukuvumela ukuba itafula ngesikhathi ibambene lesifanele, ngaleyo ndlela esindisa isikhala ekamelweni elincane.
Egumbini lokuphumula nokuklanywa
Kwezinye izimo, itafula console singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela nokugqamisa tibonwa nokuklanywa isikhala. Ukuze wenze lokhu, setha ifenisha endaweni efanele futhi ukuhlobisa it ne izibani ezengeziwe, ozimele ngezithombe, izinhlobo iyigugu enhliziyweni yakhe, nokunye. Kulokhu, etafuleni kuzodala ukulinganisela okudingekayo izinto ingaphakathi, ngeke sidonse amehlo futhi kuyoba eyamsiza endaweni ethile.
abakhiqizi Modern banezeluleko elikhulu console amatafula ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani, khetha imodeli okufanelekayo ngokwabo ngeke kube nzima ngisho ikhasimende olindele kunazo futhi ezingezwakali.
Leo-Snake: indoda ngohlamvu ekhethekile
Cupping - kuyini? Cupping (cupping): izibuyekezo, izithombe, Izimo
Ukudweba idokodo ngezandla zabo